Maxaa ka jira in Ciidamada Dowladda ay gudaha u galeen Guriceel | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in Ciidamada Dowladda ay gudaha u galeen Guriceel
Maxaa ka jira in Ciidamada Dowladda ay gudaha u galeen Guriceel
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa caawa Magaalada Guriceel ku qabtay gaari Probox ah, oo casho iyo qaadba u siday Ciidamada Dowladda ee ku sugan deegaanka Good-wiil ee duleedka magaaladaasi.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Xoogaga Ahlu Sunna ay heleen xogta gaarigaasi, waxaana la arkayay xoogagaasi oo gaariga ku eryanaya gudaha magaalada.
Dhanka kale Warbaahinta Dowladda ayaa goor dhow baahisay in Ciidamada Dowladda ay gudaha u galeen Magaalada Guriceel.
“War aan la yaabnay ayuu noqday warka caawa ka baxay Telefishinka Qaranka, ee sheegaya in Ciidamada Dowladda ay gudaha u soo galeen Magaalada Guriceel. Anaga ayaa dadkii deegaanka ah, warkaasina waxba kama jiro, ciidamadana sooma dhaafin deegaanka Good-wiil.” Ayuu yiri Warsame Maxamed oo Universaltv la hadlay.
Previous articleGalmudug oo loogu baaqay inay sii deyso odayaasha ku xiran Dhuusamareeb
Next articleWararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Magaalada Guriceel